I-plugin ye-Google AMP ayisebenzi? - Nasi isixazululo esivela ku-amp-cloud.de - ZU
I-plug-in ye-Google-AMP ayisebenzi? -
Ingabe usebenzisa i- plugin eyodwa ye-Google AMP , ithegi ye-AMPHTML noma ijeneretha ye -AMPHTML ukuze udale i-Accelerated Mobile Pages (AMP) yewebhusayithi yakho, kodwa amakhasi e-AMP awasebenzi kahle? - Lapha uzothola izixazululo nezincazelo zokuthi ungazithola kanjani izinguqulo ezilungile ze-AMP ngosizo lwe-amp-cloud.de!
Izimbangela ezivame kakhulu
Isizathu esivame kakhulu esenza ukwenziwa kwekhasi le-AMP kungasebenzi ukungabikho kwamathegi weSchema.org. I- Accelerated Mobile Pages Generator ngokuyinhloko isuselwa kumathegi e-shema.org / Micordata , eyaziwa nangokuthi "idatha ehlelekile" .
Izindatshana zakho zebhulogi noma izindatshana zezindaba ngakho-ke kufanele ziqukathe amathegi we-schema avumelekile ngokusho komunye wale mibhalo elandelayo ye-s schema.org ukuze i-plugin ye-AMP kanye nomaki we-AMPHTML bakwazi ukuqinisekisa amakhasi akho kahle futhi bafunde amarekhodi edatha adingekayo:
Awulithandi ikhasi le-AMP?
Uma ikhasi lakho le-AMP lenziwa nge-plugin ye-AMP noma ithegi ye-AMPHTML ilahlekile, isb. Umbhalo, noma izinto ezithile aziboniswa kahle ekhasini le-AMP, lokhu kuvame ukwenzeka ngenxa yamathegi e-s schema.org angabekwanga kahle noma alahlekile ukumakwa kwe- izindawo ezithile zedatha ekhasini lakho langempela.
Uma kwenzeka amaphutha anjalo: shintsha iwebhusayithi ibe yi-AMP
Mane ulandele izincomo ezingezansi ukwengeza amawebhusayithi akho nge-generator ye-AMPHTML kanye nama-plugins we-Google AMP, ukuze ukwakheka kwamakhasi akho e-AMP kusebenze kangcono ngokuya ngemibono yakho.
Lungisa amaphutha kusibonisi se-AMP:
Ama-markups eSchema.org avame ukubekwa ngendlela yokuthi, ngokwesibonelo, hhayi kuphela umbhalo we-athikili emsulwa ovalekile, kodwa futhi nezinto ezifana nomsebenzi wokwabelana noma umsebenzi wokuphawula, njll. Lezi zinto zingasetshenziswa kuzinto ezizenzekelayo Ikhasi le-AMP kungenzeka lingahunyushwa kahle futhi ngaleyo ndlela likhishwe ngokungafanele.
Ungakulungisa lokhu ngokubeka kangcono amathegi eSchema.org META ngokufaka kuphela lezo zinto empeleni ezingumbhalo we-athikili. Ngakho-ke, qiniseka ukusebenzisa amathegi emininingwane emincane ngokuya ngemibhalo yawo ukuze i-plug-in ye-AMP kanye nomaki we-AMPHTML bakwazi ukutolika kahle imininingwane yewebhusayithi yakho ukuze kugwenywe amaphutha ekubonisweni kwekhasi le-AMP.
Ikhasi le-AMP alinawo umbhalo?
Kwezinye izimo, ikhasi lakho le-AMP kungenzeka lingabi nawo nhlobo umbhalo. Isizathu esivame kakhulu salokhu umaki weSchema.org olahlekile "i-ArticleBody" noma ukusetshenziswa okungalungile kwethegi ye-ArticleBody.
Ukuze i-plug-in ye-AMP nomaka we-AMPHTML asebenze kahle futhi akwazi ukuthola umbhalo we-athikili yakho, qiniseka ukuthi usebenzisa i-Mirco-Data-Tags ngendlela efanele ngokuvumelana nenye yemibhalo ye-Schema.org esohlwini olungenhla futhi ikakhulukazi umbhalo we-athikili usebenzisa. umaki we-"articleBody".
Isihloli sethegi yamaqhinga
Ngethuluzi lokuhlola le-schema elilandelayo ungabheka ukuthi uwahlanganise kahle yini amathegi we-schema ukuze amarekhodi wedatha abalulekile kuwe angafundwa ngokuhlanzeka nangendlela efanele.
Isiqinisekisi sethegi ye-schema sihlola ukuthi ngabe ibhulogi yakho noma i-athikili yezindaba imakwe kahle futhi iqukethe idatha ye-schema evumelekile ukuze i-plugin ye-AMP ne-AMPHTML isebenze kahle:
Ithuluzi Lokuhlola Idatha Ehlelwe yi-Google
Ikhasi le-AMP ngaphandle kwedatha ehlelekile
Qinisekisa ikhasi le-AMP ngaphandle kwedatha ehlelekile? - Uma i-athikili yakho yezindaba noma i-athikili yebhulogi ingenawo amathegi we-schema, i-generator ye-AMPHTML isebenzisa amathegi e-HTML ahlukahlukene kukhodi yomthombo yekhasi lakho le-athikili ukudala ngokuzenzakalela ikhasi le-AMP elifanele kakhulu nelivumelekile le-athikili yakho.